पृथ्वीको आन्दोलन: परिक्रमण, अनुवाद, precession र पोषण | नेटवर्क मौसम विज्ञान
जब हामी हाम्रो भित्र पृथ्वीको आवागमनको बारेमा कुरा गर्छौं सौर्य प्रणाली घुमाउने र अनुवाद आन्दोलनहरू दिमागमा आउँछन्। तिनीहरू दुई सबैभन्दा राम्रो ज्ञात आन्दोलनहरू हुन्। ती मध्ये एउटा कारण त्यहाँ दिन र रात छ र अन्य कारणहरू जुन त्यहाँ वर्षको seतुहरू हुन्। तर यी आन्दोलनहरू मात्र अस्तित्वमा छैनन्। त्यहाँ अन्य आन्दोलनहरू पनि छन् जुन महत्त्वपूर्ण र राम्रो रूपमा चिनिदैन यो पोषण र प्रीसेसन आन्दोलन हो।
यस लेखमा हामी चार ग्रहहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौं जुन हाम्रो ग्रहमा सूर्य वरपर छ र ती प्रत्येकको महत्त्व छ। के तपाई यस बारे थप जान्न चाहानुहुन्छ? तपाईंले भर्खर पढिरहनु पर्छ।
1 घुमाउने गति
2 अनुवाद आन्दोलन
2.1 अफेलियन र पेरिहेलियन
3 प्रिसेसन मोशन
4 न्युटेशन आन्दोलन
यो अनुवाद संगै सबैभन्दा राम्रो ज्ञात आन्दोलन हो। तथापि, पक्कै पनि त्यहाँ महत्त्वपूर्ण पक्षहरू छन् जुन तपाईंलाई यसको बारेमा थाहा छैन। तर यसले केही फरक पार्दैन, किनकि हामी ती सबै माथि जाँदैछौं। हामी यो आन्दोलन के हो परिभाषित गरेर शुरू गर्दछौं। यो परिक्रमाको बारे हो जुन पृथ्वीको आफ्नै अक्षमा पश्चिम वा पूर्वी दिशामा छ। यसलाई एन्टी-क्लकवाइजको रूपमा मानिन्छ। पृथ्वी आफैं वरिपरि जान्छ र यसको औसत २ hours घण्टा, minutes 23 मिनेट र seconds सेकेन्ड लाग्छ।
तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, यस घुमाउरो आन्दोलनको कारण त्यहाँ दिन र रात छ। यो देखा पर्छ किनभने सूर्य स्थिर स्थितिमा छ र पृथ्वीको अनुहार मात्र यसको अगाडि रोशन गर्दछ। यसको विपरीत भाग अँध्यारो हुनेछ र रात हुनेछ। यो प्रभाव दिनको समयमा पनि देख्न सकिन्छ, घण्टा पछि छायाहरू अवलोकन गर्दै। हामी बुझ्न सक्दछौं जब पृथ्वीले सर्दा छायाँ अन्यत्र पनि हुन्छ।
यस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घुमाउने आन्दोलनको अर्को परिणाम हो पृथ्वीको चुम्बकीय क्षेत्रको निर्माण। यस चुम्बकीय क्षेत्र को लागी हामी पृथ्वीमा जीवन र सौर्य हावाबाट विकिरणबाट निरन्तर संरक्षण पाउन सक्दछौं। यो पनि पृथ्वी मा जीवन वातावरण मा हुन को लागी अनुमति दिन्छ।
यदि हामीले ग्रहको प्रत्येक बिन्दुमा स्थितिलाई ध्यानमा राख्यौं भने, यो घुमाउने गति सबै पक्षमा समान छैन। यदि हामीले भूमध्यरेखा वा पोलमा वेग मापन गर्‍यौं भने यो फरक हुनेछ। भूमध्यरेखामा यसले आफ्नो अक्ष चालू गर्न अधिक दूरी पार गर्नुपर्नेछ र यो १ 1600०० किमी प्रतिघण्टाको वेगमा जान्छ। यदि हामीले point 45 डिग्री उत्तर अक्षांशमा एउटा बिन्दु छनौट ग .्यौं भने हामी देख्न सक्छौं कि यो १०1073 किलोमिटर / घन्टामा घुम्छ।
हामी पृथ्वीको दोस्रो सबैभन्दा जटिल आन्दोलनको विश्लेषण गर्न अगाडि बढ्छौं। यो पृथ्वीको आन्दोलन हो जुन सूर्यको वरिपरि आफ्नो कक्षामा मोड गर्न मिल्छ। यो कक्षाले एक अण्डाकार आन्दोलनको वर्णन गर्दछ र कारण यो हुन्छ कि परिस्थितिमा यो सूर्यको नजिक छ र अन्य समय पछि।
यो विश्वास गरिएको छ कि समयमा ग्रीष्म monthsतुहरू तातो छ किनकि ग्रह सूर्यको नजिक छ र हिउँदमा टाढा छ। सोच्न यो सान्दर्भिक कुरा हो किनभने यदि हामी टाढा छौं भने नजिकबाट भन्दा कम गर्मी हामीमा पुग्न सक्छ। यद्यपि यो एकदम विपरित हो। ग्रीष्म winterतुमा हामी जाडोमा सूर्यबाट टाढा हुन्छौं। मौसमको उत्तराधिकारको समयमा के निर्धारण गर्दैछ सूर्यको सम्बन्धमा पृथ्वीको दूरी होइन तर सौर्य किरणहरूको झुकाव हो। जाडोमा सूर्यको किरणहरूले हाम्रो ग्रहलाई बढी झुकावमा र गर्मीमा बढी लम्ब बनाउँदछन्। यसै कारण त्यहाँ गर्मी मा धेरै घण्टा घाम र अधिक गर्मी छ।
यसको अनुवादको अक्षमा एक पूर्ण क्रान्ति गर्न पृथ्वीलाई 3655दिन, hours घण्टा, minutes takes मिनेट र seconds 48 सेकेन्ड लाग्छ। तसर्थ, प्रत्येक चार बर्षमा हामीसँग लीप वर्ष हुन्छ जुन फेब्रुअरीमा एक दिन अर्को हुन्छ। यो कार्यतालिका समायोजन गर्न र यसलाई सँधै स्थिर राख्नको लागि गरिन्छ।
सूर्यको पृथ्वीको कक्षाको परिधि 938 150 million मिलियन किलोमिटर छ र यसलाई औसत १ 000०,००,००० किलोमिटरको दूरीमा राखिएको छ। हामी यात्रा गर्ने गतिमा १०000.२ km० किमी / घन्टा छ। ठूलो गतिको बावजुद हामी पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षणको लागि धन्यवाद दिन सक्दैनौं।
अफेलियन र पेरिहेलियन
हाम्रो ग्रहले सूर्य भन्दा पहिले बनाएको पथलाई ग्रहण भनिन्छ र वसन्त र गिरावटमा भूमध्यरेखा माथि जान्छ। तिनीहरू भनिन्छ विषुववृत्ति। यस स्थितिमा, दिन र रात एक समान। ग्रहणबाट हामीले सबैभन्दा टाढाका बुँदाहरूमा फेला पार्दछौं गर्मी संक्रांति र को जाडो। यी बिन्दुहरूको बीचमा, दिन लामो छ र रात छोटो छ (गर्मीको संक्रांतिमा) र रात छोटो दिनको साथ (सर्दीमा संक्रान्तमा) हो। यस चरणको अवधिमा सूर्यको किरणहरू अर्ध गोलार्धमा अधिक ठाडो खस्छ र यसलाई अझ तताउँछ। तसर्थ, जबकि उत्तरी गोलार्द्धमा यो जाडो छ दक्षिणमा यो गर्मी र यसको विपरित हो।
सूर्यको पृथ्वीको अनुवादसँग एक क्षण हुन्छ जब यो टाढा टाढा अपफेलियन भनिन्छ र यो जुलाईको महीनामा हुन्छ। यसको विपरित, सूर्यको सबैभन्दा नजिकको विन्दु पेरिहेलियन हो र यो जनवरीको महीनामा हुन्छ।
पृथ्वीको परिक्रमण को अक्षको अभिविन्यासमा यो सुस्त र क्रमिक परिवर्तन हो। यो आन्दोलनलाई पृथ्वीको प्रगाडि भनिएको छ र पृथ्वी-सूर्य प्रणाली द्वारा शक्ति प्रयोगको क्षणको कारणले हुन्छ। यस आन्दोलनले सूर्यको किरणहरू पृथ्वीको सतहमा पुग्ने झुकावलाई सीधा असर गर्दछ। हाल यस अक्षको झुकाव २.23,43..XNUMX डिग्री रहेको छ।
यसले हामीलाई बताउँछ कि पृथ्वीको परिक्रमा का अक्ष सधैं उही तारा (ध्रुव) लाई औंल्याउँदैन, तर घडीको दिशामा घुमाउँदछ, जसले गर्दा पृथ्वीलाई स्पिनि। शीर्षको जस्तै चालमा सार्दछ। प्रिसेसन अक्षमा पूर्ण मोडमा करीव २,,25.700०० बर्ष लाग्छ, त्यसैले यो मानव स्तरमा कुनै सराहनीय कुरा होईन। जे होस्, यदि हामी संग मापन भौगोलिक समय हामी देख्न सक्छौं कि यसको अवधिमा यसको ठूलो प्रासंगिकता छ हिमनदी.
यो हाम्रो ग्रहको अन्तिम प्रमुख आन्दोलन हो। यो एक हल्का र अनियमित आन्दोलन हो जुन यसको अक्षमा घुम्ने सबै सममित वस्तुहरूको घुमा of्गको अक्षमा हुन्छ। उदाहरण को लागी gyros र स्पिनि to टॉप लिनुहोस्।
यदि हामीले पृथ्वीको विश्लेषण गर्‍यौं भने, यो पोषण आन्दोलन आकाशीय क्षेत्रको औसत स्थानको वरिपरि घुम्ने अक्षको आवधिक दोलन हो। यो आन्दोलन मा हुन्छ पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षण र चन्द्रमा, सूर्य र पृथ्वीको बीच आकर्षण द्वारा प्रयोग बल को कारण।
पृथ्वीको अक्षको यो सानो स्विंग भूमध्यरेखीय बल्ज र चन्द्रमाको आकर्षणको कारण हुने गर्छ। पोषण अवधि १.18..6 बर्ष हो।
मलाई आशा छ कि यस जानकारीको साथ तपाईले हाम्रो ग्रहको चाललाई अझ राम्ररी बुझ्न सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » खगोल विज्ञान » पृथ्वी आन्दोलनहरु: रोटेशन, अनुवाद, precession र पोषण